Voadika ny 08 Novambra 2018 4:02 GMT
Tamin'ity herinandro ity, nametraka fanontaniana tamin'ireo Saodiana mpamaky azy i Abu Hamad : “Inona no hataonao raha nanapa-kevitra ny hanafika ny Saodiana i Bush sy ny “fitondrany miaramila”?” Mihevitra izy fa amin'ny toe-draharaha misy ankehitriny dia tsy dia azo inoana loatra izany, saingy mangataka amin'ireo mpamaky azy izy mba tsy hiezaka hametra ny eritreritr'izy ireo.
Nihaona tamin'ilay bilaogera Jordaniana Ruba Al-Assi i Farooha. Tamin'ny voalohany, nanana olana ara-pifandraisana izy ireo, noho izany dia nampiasa ny teny Anglisy. Araka ny voalazan'i Farooha, “tena sahirana indrindra” ry zareo. Ary na dia samy nahazo diplaoma avy amin'ny kilasy iray tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa tao Riyadh aza ry zareo, dia tsy nahatsiaro an'i Farooha mihitsy i Roba, ary i Farooha nahatsiaro an'i Roba toy ny “Tovovavy lavabe.”
Diso fanantenana amin'ny haratsin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra miteny Arabo i Trilancer. Heveriny fa mampiseho fotsiny “ny haratsin'ny fandaharana Arabo” ny vanim-potoana lehibe ho an'ny fahitalavitra eo amin'ny Tontolo Arabo, toy ny Ramadana. Ny ratsy indrindra, ary ny hany zavatra noporofoin'ny teknolojia vaovao dia ny olona no olana, fa tsy ny fitaovana.”
Mihevitra i Nour fa ny Embrace, Cherish, and Care (Manoroka, mitia sy miahy) no teny majika telo izay hitondra ny Saodiana ho any an-tampony. “Raha te-hanorina firenena matanjaka isika, miorina amin'ny fitiavana sy ny fanajana, tsy maintsy mahazo tombony avokoa ny rehetra.” Tokony hijery ireo tena sahirana isika ary hanome azy ireo varavarana misokatra (riziky). “Isika vahoaka, fa tsy i Al-Saud, omeo tsiny izay rehetra tianao, tsy hanova zavatra izany. (…) Tsy hamadika antsika velively ny fanorohana ny fahamarinana sy manohy am-panetre-tena no sady mankamamy ny fivavahantsika Islamo”.
Prometheus milaza fa nanimba ny fiainantsika (Arabo) ny fanatisma ara-pinoana, “ary ireo mampiroborobo ity fanatisma ity dia olona donto, olona tratra aoriana”, hoy izy nanampy. “Tsy tokony hanaraka azy ireo sy hanohana ny fomba fisainany tafahoatra isika.”
Fouad al-Farhan manontany tena raha lasa mpitsikilo lehibe indrindra manerantany ny Google. Mikasika ny lohahevitra fanavakavahana ny vitsy an'isa, hoy i Jo “, no zavatra iray ahafahana milaza izay eritreritrao sy ny hafa hampiasa ireo teninao mba ahafahanao mitarika fankahalana amin'ny vondron'olona.” Digital Mind manadihady ny fomba sasany handrisihana ny fanoratana boky amin'ny teny Arabo.